DITIZIDOL FORTE | Chii ichochi? Chipimo chemushonga, Zvishandiso uye Mhedzisiro - Chispanish
Iphone wont show up pane maTunes
maitiro ekugadzirisa youtube app pane iphone
kumisikidza isina waya printer pane iphone
maitiro ekuodha pasi podcast ku iphone 6
Ditizidol Forte Iwo mushonga uyo ine zvinoshandiswa zvinoshandiswa Diclofenac , thiamine , pyridoxine uye cyanacobalamin . Iyo isiri-steroidal anti-kupisa mishonga inoshandiswa kurapa kurwadziwa uye kuzvimba.
Diclofenac kana diclofenac Iyo isiri-yekusarudza inhibitor ye cyclooxygenase uye nhengo yemhuri yeasina-steroidal anti-anogumbura zvinodhaka ( CHINYANYA ). Zviri nezve myorelajante Kunyanya kuratidzirwa kudzikisa kuzvimba uye kubvisa marwadzo anokonzerwa nemaronda madiki uye kurwadziwa kwakanyanya senge kunokonzerwa neArthritis.
Iyo inoshandiswa mune iyo kesi ye zvirwere musculoskeletal senge rheumatoid arthritis, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, spondyloarthritis, gout kurwisa, uye marwadzo manejimendi anokonzerwa neitsvo nematombo enduru.
Inoshandiswawo kubata zvakanyanya migraines. Iyo inoshandiswa kurapa hunyoro uye hunyoro marwadzo anokonzerwa nekuvhiyiwa kana kushungurudzika. Iyo inoshanda pakurwisa kurwadziwa kwekuenda kumwedzi.
Mune dzimwe nyika inoshandiswa kurapa marwadzo uye kupisa muviri kwakabatana nezvirwere zvakajairika.
Peripheral neuropathies yeakasiyana etiopathogenesis
Chirwere cheshuga neuropathy
Diclofenac / vit B1 / B6 / B12. Oral. 150/150/150/3 kana 150/150/150 /
0.75 mg zuva nezuva , kunyanya mushure mekudya. Kurapa kunogona kureba kana chiremba vaona zvakakodzera.
I.M .: imwe vial ye vit B1 / B6 / lidocaine hydrochloride 100/100/20 mg uye imwe ye diclofenac / vit B12 75/1 mg yakavhenganiswa musirinji imwe chete, kamwe chete pazuva kwemazuva maviri .
Inogona kuwanikwa mu25 uye 50 mg mapiritsi uye mune anononoka mafomu ekuburitsa pa75, 100 uye 150 mg.
Ditizidol forte ine B yakaoma mavitamini pamwe nediclofenac.
Hypersensitivity kune izvo zvinoumba fomu; polycythemia vera; vit B12 haifanire kushandiswa mukutanga chirwere cheLeber (nhaka yekufa kweiyo optic nerve); gastroduodenal asidhi-peptic ulcer; mune varwere vanorwiswa nebronchial asthma, urticaria kana acute rhinitis vanodzorwa neASA kana zvigadzirwa zvayo; enf asidhi-peptic; varwere vane nhoroondo yekubuda ropa mudumbu; nepamuviri, lactation uye vana<12 años; I.R. y/o I.H.; HTA severa; citopenias.
Yambiro uye yambiro
Diclofenac: Nhoroondo yekubuda ropa mudumbu, ulcer kana kupera, IR, isina kudzora HTN kana chirwere chemoyo pamwe nekuchengetedza kwemvura uye / kana edema. I-H
Thiamine: Nhoroondo yekusagadzikana kugadzirira ine thiamine.
Pyridoxine: Neonatal pfari, kurapwa panguva imwe chete nelevodopa.
Cyanocobalamin: Kurapa kweCyanocobalamin kunogona kuvhara kushaikwa kwe folic acid, folic acid mune mikuru mikuru inogona kugadzirisa megaloblastosis inokonzerwa nehutachiona hweB12, asi haidziviriri matambudziko emitsipa angave asingachinjiki.
Varwere vane mvumo yekupererwa neropa kana vit B12 kushomeka yechipiri kune isingadzoreke yekumhanyisa hurema inoda hupenyu hwese cyanocobalamin kurapa. Kusakwana kwemakiriniki ekupindura cyanocobalamin kunogona kuitika pamberi pehutachiona, chirwere chetsvo, tumota, kana kushomeka kwefolic acid kana iron.
Kusuruvara kwepamuviri uye kurwadza
flatulence kana kusagadzikana kwechiropa basa bvunzo
Iyo inopesana mune inotevera kesi:
Izvo zvinopesana mune zviitiko zveitsvo uye chiropa kutadza.
Hypersensitivity kune izvo zvikamu zveiyo fomula.
Yakakomba kutadza kwemoyo
Haifanire kudyiwa kana uchitambura nechirwere chekutanga cheLeber.
varwere vane nhoroondo yekubuda ropa mudumbu.
Varwere vane asthma, urticaria kana rhinitis inokonzerwa neASA kana zvigadzirwa zvayo.
Anopisa mamota mamiriro seCrohn's chirwere kana ulcerative colitis
Izvo zvinopesana zvakare panguva yekuzvitakura (kunyanya panguva yetatu trimester), kuyamwisa uye muvana vari pasi pemakore gumi nemaviri ekuberekwa.
Thiamine inogona kuwedzera mhedzisiro yemaurotransmitter anovharira vamiririri.
Pyridoxal phosphate inosimudzira iyo yekumusoro decarboxylation ye levodopa uye inoderedza kushanda kwayo pakurapa chirwere chaPasinson.
Cycloserine uye hydralazine vanopikisa vhitamini B6.
Kushandiswa kwenguva refu kwepenicillamine kunogona kukonzera kushomeka kwevhitamini B6.
Iko kunwiwa kwevhitamini B12 mudumbu kunogona kuderedzwa nekutungamirwa kweinotevera madhiragi: Aminoglycosides, kwenguva refu-kuburitsa potassium-yakagadzirira kugadzirira, colchicines, aminosalicylic acid nemunyu wayo, anticonvulsants (phenytoin, phenobarbital, primidone), irradiation necobalt mumatumbo mudiki uye kubva pakunyanyisa kunwa doro kweanopfuura mavhiki maviri.
Iko panguva imwe chete manejimendi neomycin uye colchicine inowedzera malabsorption yevhitamini B12.
Ascorbic acid inogona kuparadza huwandu hwakakura hwevhitamini B12.
Kugadziriswa kwekutonga kwekloramphenicol uye vhitamini B12 kunogona kupesana nehematopoietic mhinduro yevhitamini.
Iko kumisikidzwa panguva imwe chete kwe diclofenac ine lithium- kana digoxin-yakagadzirira kugadzirira kana ne potassium-inodzivirira diuretics inogona kuwedzera kuwanda kweplasma yemishonga iyi.
Varwere vanorapwa neanticoagulants vanofanirwa kuongororwa.
NSAID dzinoda kumiswa 24 h isati yapa methotrexate kurapwa.
Dhivha - Kana iwe ukarasikirwa neiyo dose
Kuti uwane rubatsiro rwakanakisisa, zvakakosha kuti ugamuchire wega wega mushonga uyu zvakarongwa. Kana iwe ukakanganwa kutora yako dosi, bata chiremba wako kana wemishonga ipapo ipapo kuti ugadzire nyowani dosing purogiramu. Usapeta kaviri muyero kuti ubate.
Kana mumwe munhu akawandisa uye aine zviratidzo zvakakomba sekufenda kana kufema kwekufema, fonera 911. Zvikasadaro, fonera nzvimbo inodzora chepfu ipapo ipapo. Vagari vemuUnited States vanogona kufonera nzvimbo yavo yekudzora chepfu ku 1-800-222-1222 . Vagari veCanada vanogona kufonera nzvimbo yekudzivirira huturu yeprovince. Zviratidzo zvekuwedzeredza zvinogona kusanganisira: kubatwa.
Usagovane mushonga uyu nevamwe. Rabhoritari uye / kana zvekurapa bvunzo (senge yakazara ropa kuverenga, itsvo basa bvunzo) inofanirwa kuitwa iwe uchiri kushandisa mushonga uyu. Chengeta zvese zvekurapa uye zvema laboratory.
Tsvaga mirairo yechigadzirwa uye wemishonga wako kuti uwane zvekuchengetedza. Chengetedza mishonga yese pasingasvike vana nezvipfuyo, usadonhedze mishonga pasi pechimbuzi kana kuidururira pasi padrain kunze kwekunge warairwa kudaro. Nyatso rasa chigadzirwa ichi kana chapera kana kuti chisingachadiwi. Bvunza wako wemishonga kana wekambani yako yekurasa marara.
Disiki: Redargentina yaita zvese zvinogoneka kuti ive nechokwadi chekuti ruzivo rwese nderwechokwadi, rwakakwana uye rwechizvino-zvino. Nekudaro, ichi chinyorwa hachifanirwe kushandiswa sekutsiva ruzivo uye ruzivo rweanobvumidzwa nyanzvi yehutano. Iwe unofanirwa kugara uchibvunza chiremba wako kana imwe nyanzvi yehutano usati watora chero mushonga.
Ruzivo rwezvinodhaka ruri pano runogona kuchinja uye haruna kuitirwa kufukidza zvese zvinoshandiswa, mirayiridzo, chengetedzo, kunyeverwa, kudyidzana kwezvinodhaka, allergic reaction, kana mhedzisiro. Kushaikwa kweyambiro kana rumwe ruzivo rwemumwe mushonga hakuratidze kuti mushonga kana musanganiswa wezvinodhaka wakachengeteka, unoshanda, kana wakakodzera kuvarwere vese kana kune ese mashandisirwo.